ToutApp: Fanarahana ny varotra, ny maodely ary ny analytics | Martech Zone
ToutApp: Fanarahana ny varotra, ny maodely ary ny Analytics
Alakamisy Janoary 3, 2013 Sabotsy, Desambra 12, 2015 Douglas Karr
Ho an'ny orinasam-pivarotana lehibe, ny solontenan'ny varotra ivelany dia manana ny toerany tsy azo ovaina amin'ny fifandraisany amin'ny antontam-pitarihana indraindray hifandraisany amin'ireo fanantenana iray na roa izay hiova fo. Rafitra automatisation marketing vaovao toa ny mpanohana anay Right On Interactive mitantana ny isa sy ny fikolokoloana fifandraisana ho an'ny be sy ny maro, fa ny mpiasa am-barotra kosa dia mbola mila mamokatra ny mailaka azy ireo 1: 1 mba hifandraisany manokana amin'ny fitarihan'izy ireo.
rehetra dia sehatra haingam-pivoarana varotra izay manampy ny ekipan'ny varotrao hanoratra mailaka haingana kokoa, hanaraka ny fifampiraharahana ary hifanarahana akaiky kokoa. Miasa miaraka amin'ireo fitaovanao misy ny Gmail, Outlook, ary Salesforce.
Fahanana mivantana - Tsy vitan'ny ahafahanao manara-maso ny fomba fijery, tsindry ary valiny, fa afaka mandray andraikitra mivantana avy amin'ny Live Feed anao ianao. Amin'ny tsindry iray, miantso, mandefasa mailaka na jereo ny angona CRM amin'ny toerana iray.
Fanarahana ny mailaka - Makà fahitana amin'ny fotoana tena izy amin'ny zava-mitranga amin'ny mailakao. Fantaro rehefa misy mahita, manindry na mamaly amin'ny mailaka.
Fanarahan-tranonkala - Mahazoa hevi-baovao amin'izay mahaliana ny vinavinanao. Raha vantany vao tsindry ny rohy iray amin'ny rohy iray amin'ny mailakao, dia ho fantatrao tsara hoe rehefa mitsidika ny tranokalanao izy ireo, pejy iray momba ny vidiny na Ivotoerana fanampiana aorian'izay.
Fanaraha-maso Attachment - Miaraka amin'ny Tracking Attachment, tsy ho tavela ao anaty haizina mihitsy ianao. Jereo raha nisy vinavinan-javatra nanokatra ny firaketanao, sy ny pejy izay nojeren'izy ireo.
Mampiasà Tout Inside Your Email Client - Azonao atao ny mampiasa Tout avy amin'ny rindrambaiko miorina amin'ny tranokala, ny rindranasa finday avy aminay, avy amin'ny CRM na avy ao anatin'ny Gmail Clients an'ny mailaka sy Outlook aza.
Miharo amin'ny Salesforce sy CRM hafa - Tout dia miditra mivantana ao amin'ny Salesforce, Highrise, CapsuleCRM ary Batchbook, mampifandray ireo fifandraisana ary mitazona ho azy hatrany ny asanao.
Tags: fifandraisana amin'ny varotramailaka fivarotanaFanamafisana ny varotrarehetratoutapp
Wireframing maimaim-poana sy mora amin'ny Wireframe.cc